ကိုရိုနာကြောင့် သင့်ကလေးကိုကျောင်းပို့မလား - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Khonumthung»ကိုရိုနာကြောင့် သင့်ကလေးကိုကျောင်းပို့မလား
ယနေ့အချိန်အထိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း (၆၂၆၃၉၁၁) ဦးရှိပြီး ယခုလက်ရှိမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကူးစက်ခံရသူအများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒုတိယအများဆုံးကတော့ ဘရာဇီးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကတော့ အမှတ်စဉ် (၁၅၇) မှာရပ်တည်နေပြီး စုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ (၂၂၈) ဦးရှိကာ ပြန်လည်သက်သာလာသူ (၁၃၈) ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ (၆) ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။ ကူးစက်ခံရသူတွေထဲမှာ ကလေးငယ်များပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇွန်လ (၂၂) ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ စတုတ္ထတစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဝန်ကြီးက ပြည်တွင်းကူးစက်မှုအခြေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရောဂါကူးစက်မှုအတိုင်းတာကိုရှင်းပြပြီးနောက်မှာ အတိုင်းတာတစ်ခုအထိရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါကူးစက်သူများကတော့ထပ်တိုးလာလျက်ရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအခြေနေမျိုးမှာ ကျောင်းများကို ဇူလိုင်လ (၂၁) မှာပြန်ဖွင့်မယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တာနဲ့ အညီမိဘပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအမှတ် ဟာလည်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိသွားပြန်ပါတယ်။ တချို့က မိမိကလေးများကို ကျောင်းပို့မယ်/ မပို့ဘူးစသည့်ကိစ္စများနဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေရှိပြန်ပါတယ်။
ချမ်းသာတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ကတော့ မိမိကလေးများကို အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ကျောင်းကိုသွားစရာမလိုပဲ ပညာသင်ယူမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပေမယ့် တစ်နေ့ထမင်းနပ်မှန်အောင်ကြိုးစားနေရတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားများအတွက်ကတော့ မိမိတို့သားသမီးများပညာရေးအတွက်အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုဆိုတာ အလှမ်းဝေလှပါတယ်။ မဖြစ်မနေ ပညာတတ်ဖို့ကျောင်းကိုပို့ရမှာတော့အမှန်ပါပဲ။
မဖြစ်မနေပညာရေးအတွက် မိမိကလေးကိုကျောင်းကိုလွှတ်မယ်ဆိုရင် မိဘတွေအနေနဲ့ မိမိရဲ့ကလေးများကိုအောက်ပါအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြထားသင့်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ပြောပြဖို့အရေးကြီးတာလဲ? ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ဟာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကနေ ကူးစက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ဟာ မျက်နှာ၊ နှာခေါင်းတွေကိုထိတွေမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိမ်ိလက်မှာ ဗိုင်းရပ်(စ်) ပိုးကပ်တွယ်လာရင် လက်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း မိမိကလေးများကိုသေချာစွာရှင်းပြပါ။
၂) Mask တပ်ပါ
မိမိရဲ့ကလေးများကို ကျောင်းသို့လွှတ်လျှင် Mask တပ်သွားခိုင်ပါ။ Mask တပ်ခြင်းအားဖြင့် တခြားသူတွေမှထွက်လာတဲ့ အမှုန်အဝါးတွေကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိကလေးများ ချောင်းဆိုး၊ နှာစေးနေရင် ကျောင်းကိုမလွတ်ပါနဲ့၊
မိမိရဲ့ကလေးများကို ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်ကျွေးမွှေးပါ။ ပဲနဲ့ အခြား ဗီတာမင်ဓာတ်ပါတဲ့အစာတွေကို မျှတအောင်ကျွေးမယ်ဆိုရင် သင်ကလေးဟာကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်းနေတဲ့အတွက် အလွယ်တကူရောဂါမကူးစက် နိုင်ပါဘူ။
ကလေးများအနေနဲ့ ဆော့ကစားမှာတော့အသေချာပါပဲ။ မိမိကလေးများကို မဆော့နဲ့လိုတော့ တားလို့ရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ? မိမိကလေးများကို လူလေးယောက်ထက်ပိုစုရင် ရောဂါအလွယ်တကူကူးစက်နိုင်ကြောင်းသေချာစွာရှင်းပြပါ။ ရောဂါကူးစက်ခံရရင်ဘယ်လောက်ထိအန္တရယ်များကြောင်းသေချာစွာရှင်းပြပါ။ ခြောက်လှန့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ သေချာသဘောပေါက်အောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင် သူတို့ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျ နေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲမိဘများအနေနဲ့မိမိရဲ့ကလေးမျာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ မိမိကစပြီးသင်ကလေးများကို ကောင်းစွာကူညီပေးနိုင်ကြပါစေ။
ယနအေ့ခြိနျအထိ ကမ်ဘာတဈဝှမျးလုံးမှာ စဈတမျးကောကျယူခကျြအရ ကိုဗဈရောဂါကူးစကျခံရသူစုစုပေါငျး (၆၂၆၃၉၁၁) ဦးရှိပွီး ယခုလကျရှိမှာ အမရေိကနျနိုငျငံက ကူးစကျခံရသူအမြားဆုံးဖွဈပွီး ဒုတိယအမြားဆုံးကတော့ ဘရာဇီးနိုငျငံဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံကတော့ အမှတျစဉျ (၁၅၇) မှာရပျတညျနပွေီး စုစုပေါငျးကူးစကျခံရသူ (၂၂၈) ဦးရှိကာ ပွနျလညျသကျသာလာသူ (၁၃၈) ဦးရှိပွီး သဆေုံးသူ (၆) ဦးထိရှိခဲ့ပါတယျ။ ကူးစကျခံရသူတှထေဲမှာ ကလေးငယျမြားပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါနဲ့ပတျသကျပွီး ဇှနျလ (၂၂) ရကျမှာပွုလုပျခဲ့တဲ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနရဲ့ စတုတ်ထတဈနှဈတာကာလအတှငျး ဆောငျရှကျခဲ့မှုသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ဝနျကွီးက ပွညျတှငျးကူးစကျမှုအခွနေနေဲ့ပတျသကျပွီး ရောဂါကူးစကျမှုအတိုငျးတာကိုရှငျးပွပွီးနောကျမှာ အတိုငျးတာတဈခုအထိရောဂါကိုထိနျးခြုပျနိုငျပွီလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရောဂါကူးစကျသူမြားကတော့ထပျတိုးလာလကျြရှိနတေုနျးပဲဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီအခွနေမြေိုးမှာ ကြောငျးမြားကို ဇူလိုငျလ (၂၁) မှာပွနျဖှငျ့မယျလို့ပညာရေးဝနျကွီးဌာနကထုတျပွနျတာနဲ့ အညီမိဘပွညျသူတှရေဲ့စိုးရိမျပူပနျမှုအမှတျ ဟာလညျအမွငျ့ဆုံးကိုရောကျရှိသှားပွနျပါတယျ။ တခြို့က မိမိကလေးမြားကို ကြောငျးပို့မယျ/ မပို့ဘူးစသညျ့ကိစ်စမြားနဲ့ အငွငျးပှားမှုတှရှေိပွနျပါတယျ။
ခမျြးသာတဲ့မိဘတှအေနနေဲ့ကတော့ မိမိကလေးမြားကို အှနျလိုငျးစနဈဖွငျ့ ကြောငျးကိုသှားစရာမလိုပဲ ပညာသငျယူမှုမြားပွုလုပျနိုငျကွပမေယျ့ တဈနထေ့မငျးနပျမှနျအောငျကွိုးစားနရေတဲ့ အခွခေံလူတနျးစားမြားအတှကျကတော့ မိမိတို့သားသမီးမြားပညာရေးအတှကျအှနျလိုငျးသငျကွားမှုဆိုတာ အလှမျးဝလှေပါတယျ။ မဖွဈမနေ ပညာတတျဖို့ကြောငျးကိုပို့ရမှာတော့အမှနျပါပဲ။
မဖွဈမနပေညာရေးအတှကျ မိမိကလေးကိုကြောငျးကိုလှတျမယျဆိုရငျ မိဘတှအေနနေဲ့ မိမိရဲ့ကလေးမြားကိုအောကျပါအကွောငျးအရာတှကေိုပွောပွထားသငျ့ပါတယျ။
ဘာကွောငျ့ပွောပွဖို့အရေးကွီးတာလဲ? ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ(ဈ)ဟာ အသကျရှုလမျးကွောငျးကနေ ကူးစကျတာဖွဈတဲ့အတှကျ လကျဟာ မကျြနှာ၊ နှာခေါငျးတှကေိုထိတှမှေုအမြားဆုံးဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့ မိမျိလကျမှာ ဗိုငျးရပျ(ဈ) ပိုးကပျတှယျလာရငျ လကျဆေးခွငျးအားဖွငျ့ကာကှယျနိုငျကွောငျး မိမိကလေးမြားကိုသခြောစှာရှငျးပွပါ။
၂) Mask တပျပါ
မိမိရဲ့ကလေးမြားကို ကြောငျးသို့လှတျလြှငျ Mask တပျသှားခိုငျပါ။ Mask တပျခွငျးအားဖွငျ့ တခွားသူတှမှေထှကျလာတဲ့ အမှုနျအဝါးတှကေိုကာကှယျနိုငျပါတယျ။ မိမိကလေးမြား ခြောငျးဆိုး၊ နှာစေးနရေငျ ကြောငျးကိုမလှတျပါနဲ့၊
မိမိရဲ့ကလေးမြားကို ကိုယျခံအားကောငျးအောငျကြှေးမှေးပါ။ ပဲနဲ့ အခွား ဗီတာမငျဓာတျပါတဲ့အစာတှကေို မြှတအောငျကြှေးမယျဆိုရငျ သငျကလေးဟာကိုယျခံအားကောငျးမှနျးနတေဲ့အတှကျ အလှယျတကူရောဂါမကူးစကျ နိုငျပါဘူ။
ကလေးမြားအနနေဲ့ ဆော့ကစားမှာတော့အသခြောပါပဲ။ မိမိကလေးမြားကို မဆော့နဲ့လိုတော့ တားလို့ရမှာတော့မဟုတျပါဘူး။ ဒါဆိုရငျဒီကိစ်စကိုဘယျလိုကိုငျတှယျမလဲ? မိမိကလေးမြားကို လူလေးယောကျထကျပိုစုရငျ ရောဂါအလှယျတကူကူးစကျနိုငျကွောငျးသခြောစှာရှငျးပွပါ။ ရောဂါကူးစကျခံရရငျဘယျလောကျထိအန်တရယျမြားကွောငျးသခြောစှာရှငျးပွပါ။ ခွောကျလှနျ့တာမြိုးမဟုတျပဲ သခြောသဘောပေါကျအောငျပွောပွမယျဆိုရငျ သူတို့ကိုယျတိုငျစနဈတကြ နထေိုငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ကဲမိဘမြားအနနေဲ့မိမိရဲ့ကလေးမြာ ကနျြးမာပြျောရှငျစှာပညာသငျကွားနိုငျဖို့ မိမိကစပွီးသငျကလေးမြားကို ကောငျးစှာကူညီပေးနိုငျကွပါစေ။
ချင်းပါတီကြီး ၃ ခု တကယ်ပေါင်းစည်းနိုင်ပါ့မလား